राजा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाबाबुबीचका ऐतिहासिक वार्ता - Nepal News Australia
निकै मिहिनेतका साथ बटुलिएको फरक समय र सन्दर्भका यी वार्ताहरू तत्कालीन राष्ट्रिय राजनीतिलाई चिहाउन सहायक-
स्थान : वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, छाउनी । दिन : २०५८ साल जेठ २१ गते आइतबार । समय : अपरान्ह अन्दाजी ४ बजे । बादल लागेको मौसम तर पानी नपरिहाल्ला भन्न सकिने अवस्थामा छ । तत्कालीन अधिराजकुमार (राज्य सहायक) ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सैनिक अस्पतालको प्राङ्गणमा लगाइएको सामियाना नजिक उभिएका छन् । सामियानामा यतिखेर कोही छैन । सैनिक सुरक्षा अत्यन्त कडा बनाइएको छ । दरबारका सचिब, एडीसी र अन्य स्टाफ अलि पर स्ट्याण्डबाई छन् । प्रधानमन्त्री भर्खर गाडीबाट ओर्लिएर सिधै अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र छेउ पुगेका हुन् । अधिराजकुमार शोकमग्न, तनाबग्रस्त र केही हडबडाएको देखिन्छन्। उल्लेखित वार्तामा ‘ज्ञ’ ले ज्ञानेन्दलाई र ‘ग’ ले गिरिजालाई बुझाउँछ :
ज्ञ : त्यसलाई (विष खाने कुरालाई) बाहिर नल्याउँ । मलाई त लाग्दैछ दाजु (राजा वीरेन्द्र) लाई दागबत्ती दिनेलाई श्रीपेच लगाइदिऊँ ।
स्थान : निर्मल निवास, महाराजगञ्ज । राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी राजदरबारमा बस्न थालेका छैनन् । दिन : २०५८ साल असार २९ गते शुक्रबार । समय : अपरान्ह अन्दाजी २ बजे । रोल्पाको होलेरी इलाका प्रहरी कार्यालयका ७२ जना प्रहरीको अपहरण गर्ने माओवादीका विरूद्ध परिचालन गरिएको शाही नेपाली सेना परिचालन त भयो तर त्यसले माओवादीविरूद्ध कुनै सैनिक अपरेशन गरेन । यही विषयलाई लिएर राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाका वीच कुराकानी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कोइराला आज निकै मुडअफ देखिन्छन् ।
ग : आर्मीले गभर्न्मेन्टको आदेश पालन गरेको छैन सरकार । (प्रधान) सेनापति (प्रज्वल्ल शम्शेर) को गतिविधिबाट म सन्तुष्ट छैन, के गर्न खोजेको हो उनले, मलाई त शङ्का बढ्दैछ। कसैको केही आसय पाएर यसो गरेको हो कि जस्तो लाग्दैछ । यताबाट बेग्लै आदेश त गएको छैन आर्मीलाई ? म कन्फ्युज्ड् भएँ सरकार !
प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यहीँ राजिनामा लेखेर दिए । राजाबाट स्वीकृत भयो ।
समय : साँझ । स्थान : नागार्जुन दरबार । मिति : २०६० सालको कुनै साँझ । आन्दोलनरत पाँचदलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रममा तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद मण्डल र नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) सभापति शेरबहादुर देउबालाई पनि समावेश गरिएको दृश्य त्यहीँ पुगेर देखेपछि गिरिजाप्रसादको मुड अर्कै भयो :
मिति : २०६१ साल माघ १९ गते शुक्रबार । राती माघे झरी परेर बिहान रोकिएको हुनाले मौसम सफा छ । स्थान : महाराजगञ्जस्थित गिरिजाप्रसाद बस्नेगरेको डा. शशाङ्कको घर । राजाले देउबालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफूलाई प्रधानमन्त्री हुन बोलाउँछन् भनी गिरिजाप्रसाद कोइराला दौरा–सुरवाल कोट टोपी लगाएर भेट्न आउने कसैलाई नभेटी घरीघरी घडी हेर्दै प्रतीक्षाको मुडमा बसिरहेका छन् । राजाको शाही संवोधन उनले त्यही प्रतिक्षामै सुने । तर दरबारबाट कुनै फोन नआएपछि मनाही गरिएको भए पनि एउटा चुरोट सल्काए र यतिमात्र भने “फेरी धोका भयो…….।”
मुलुकको मुँंहारको बिमानस्थल भवन भट्ट
फेरि पनि देशले संविधान पाएन